Myanmar Mobile App Market v1.1 for Android – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
WhatsApp Messenger 2.9.7312 for android(latest version) Frozen Keyboard Pro v 0.5.3 for android Gmail sign in ၀င်လျှင်ဖြစ်တတ်သော Can't establishareliable data connection to the server error အားဖြေရှင်းခြင်း VPlayer Video Player FULL v3.1.9 for android(latest version) Next Launcher Windows PC Theme v1.3 for android Home
Published On: Sat, Jan 26th, 2013 Android OS application များ | By သက်နိုင်စိုး Myanmar Mobile App Market v1.1 for Android
Application Name- Myanmar Mobile App Market
Application Owner- Myanmar Mobile Application Store (www.myanmarmobileapp.com)
Application Developer – eonLogix Development (www.eonLogix.com)
Application Version- 1.1
Requirements:Android OS 2.1 and up
This application is the product of Myanmar Mobile Application Store (www.myanmarmobileapp.com)
Market အတွက် အသစ်တင်သမျှ app,game များကို Facebook စာမျက်နှာ www.facebook.com/myanmarmobileappmarket ကို Like လုပ်ထားခြင်းဖြင့်သိရှိနိုင်ပါသည်။ Android applicaton,game များကို Android ဖုန်း/Tablet များမှ တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်မည့် Mobile App Market ” Myanmar Mobile App Market” ကို Download ရယူနိုင်ပါပြီ။ Android ဖုန်းသုံးစွဲသူ Mobile Users များအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် Myanmar Mobile Application Store ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ Mobile App Market ကို eonLogix Software Development မှတာဝန်ယူရေးသားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ Mobile App Market ရဲ့ Features များကတော့
-ပထမဆုံးမြန်မာစာစနစ်သုံး မြန်မာ Android market application ဖြစ်ခြင်း
-application မှ မြန်မာစာကိုမြင်ရန် ဖုန်းတွင် root လုပ်ထားရန်/မြန်မာစာ သွင်းထားရန်မလိုအပ်ခြင်း
- ဖုန်းဆော့ဝဲ ၊ ဂိမ်းများအားလုံးကို မြန်မာဘာသာဖြင့် detail ဖော်ပြပေးထားခြင်း
-မြန်မာ Mobile App Market မှ ဆော့ဝဲများကို ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် Direct Download ရယူနိုင်ခြင်း
-free version ထုတ်ဝေထားသော android app,game များ ၊ ပိုက်ဆံပေးဝယ်ယူရမည့် android app,game များကို မြန်မာ Mobile App Maket တွင်အခမဲ့ရယူနိုင်အောင်တင်ပေးထားခြင်း
မြန်မာ Mobile App Market တွင် App, Game သီးသန့်ကဏ္ဍများခွဲထားသည့်အပြင် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် ကဏ္ဍခွဲများထပ်မံခွဲပေးထားသောကြောင့် မိမိတို့လိုချင်သော app ကိုရှာဖွေရာတွင် ပိုမိုထိရောက်လွယ်ကူစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
application,game တစ်ခုစီချင်းဆီ၏အကြောင်းအရာများကို မြန်မာဘာသာဖြင့်သာ ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသောကြောင့် Android ဖုန်းကိုင်သော မြန်မာလူမျိုးတိုင်း application တစ်ခုချင်းစီရဲ့အကြောင်းအရာများကို မိမိတို့၏မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် အလွယ်တကူနားလည်သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
“ဆော့ဝဲအားရယူရန်” ဆိုသည့် ခလုတ်အားနှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် ဆော့ဝဲကို တိုက်ရိုက် download လုပ်ပေးမည်ဖြစ်သလို ၊ application list ဘေးတွင်ရှိသော Down Arrow လေးကိုနှိပ်၍လည်း မိမိတို့ download လုပ်လိုသောဆော့ဝဲအား direct download (one click download) လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
download လုပ်လိုက်သော ဆော့ဝဲ ၊ ဂိမ်းတစ်ခု download ပြီးစီးသွားသည့်အခါ Installation လုပ်ဆောင်ရန်ကဏ္ဍသို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် ဆော့ဝဲတစ်ခု download လုပ်ပြီးတာနဲ့ Install ခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့် ဖုန်းထဲမှာ download လုပ်လိုက်သော ဆော့ဝဲအား install လုပ်ပြီးဖြစ်စေမှာပါ။
သက်ဆိုင်ရာ application list များထဲမှ app,game များကိုရွေးချယ် download လုပ်နိုင်သလို “မှန်ဘီလူးပုံ” သင်္ကေတလေးကိုနှိပ်၍ မိမိတို့ လိုချင်သော ဆော့ဝဲရှိ/မရှိကို ရှာဖွေ၍လည်း download ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ Mobile App Market for Android v1.1 ကိုအောက်က link မှာ download ရယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ Mobile App Market v1.1 for Android အားရယူရန်
(Download Link 1)
(Download Link 2)
သက်နိုင်စိုး - Thet Naing Soe (http://www.facebook.com/thetnaing.mmas)--------------------------
Founder of Myanmar Mobile App (www.myanmarmobileapp.com) --
ကျွန်တော်ကဘာလဲ.... မင်းကဖောက်ထွင်းမြင်ရတယ်.. အားတက်သရောလဲစီးဆင်းတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အရှိန်ကိုယ်မထိန်းနိုင်ဘူး.. အဲဒါကြောင့်.. ရေတံခွန်
WhatsApp Messenger 2.9.7312 for android(latest version)
VPlayer Video Player FULL v3.1.9 for android(latest version)
Next Launcher Windows PC Theme v1.3 for android
6 comments on “Myanmar Mobile App Market v1.1 for Android”	htutmyat on January 27, 2013 at 3:21 pm said:
ကျွန်တော်စမ်းလုပ်ထားတဲ့ apk Game လေးဖြစ်လို့ Myanmar mobile app ပေါ်မှာ
Reply ↓	Anatta on January 29, 2013 at 3:05 pm said:
I was successful in Note 2.
Reply ↓	puppy on February 6, 2013 at 9:27 am said:
ကျနော့် aoson m92 tablet လေး ၀ယ်ပြီး၂ပတ်အကြာ firmware ကျသွားတာနဲ့ 
ဆိုင်မှာပြန်တင်ခိုင်းထားတာ တစ်လနီးပါးရှိပါပြီ။ အခုထိမရသေးပါဘူး၊ ကျနော်လည်း net မှာရှာတာမတွေ့ သေးပါဘူး။ အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ အကြံပေးကြပါအုံးနော်…
Reply ↓	zyl.net.mm on March 10, 2013 at 8:43 am said:
ရိုက် ခွဲပစ် လိုက်
Reply ↓	Moe Kyaw on February 24, 2013 at 1:48 pm said:
link က down တာရတယ်ဒါပေမယ့် intall လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် parse error ပြနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကူညီပါအုံး
Reply ↓	zaw moe aung on February 28, 2013 at 1:07 pm said:
I have complete download. When i press apk file it disapper
In my phone ( samsung galaxy note2)
What should i do for installing.
Pls talk to me.
kominnoung on How to Install Myanmar Font On Samsung Galaxy S4-i9500 & i9505-(Without Rooting)kaung khant kyaw on CDMA 800 Mhz SIM Card များနှစ်လအတွင်းချပေးပြီးလျှင် GSM,WCDMA နှင့် CDMA SIM Card များတစ်ပြိုင်နက်ချပေးမည်။kyawsoe(hinthada) on ဖုန်းဈေးနှုန်းများ ( Mobile Price)နေမျိုးကျော်ထက် on Wondershare MobileGo for Android 3.2.0 For Pc 25.49 MBKyaw Thu on Y220T recovery ခေါ်နည်းနဲ့ firmware တင်နည်း Android Development